Inkonzo -Shenzhen Radiant Technology Co., Ltd.
Njengoko iicawa uqhubeka ukubona ukukhula, LED uye waba the go-ukuya isisombululo ekusasazeni umyalezo yazo zombini ngaphakathi nangaphandle. Enoba abafuna eludongeni ibandla LED ukubonisa amazwi ingoma kunye iindawo ntshumayelo, okanye uphawu ecaleni yedijithali LED ukubonisa izaziso abantu abadlulayo, LED imiboniso ziyindlela efikelelekayo, olusebenzayo amabandla ukuba banxibelelane
Uhlobo nezimo panel isiboniso LED ivumela iqela lwakho lwemveliso ibandla ndilungise lula kwaye kwiprogram izibonisi zakho iqalele inkangeleko yeqonga yakho. Umboniso LED, akuzange kube lula okanye ngempumelelo ngaphezulu egcine lujongo nokuva kwazo loyilo Inqanaba icawa yakho entsha. Bungqingqwa lemiboniso LED ecaweni ikuvumela ukuba amalungiselelo ebonwayo zakho ngeendlela ezahlukeneyo; uyakwazi ukubeka ecaleni ibonisa zakho ecaleni ukudala, bonisa enkulu ingenamthungo okanye ndiwachithachithe imiboniso zakho ngapha nqanaba ukongeza Ubunzulu ledayimenshini leyo eyayingekhe iphinde iphunyelelwe kunokufikelelwa kunye nokunyuka okanye namanye amagosa okubeka esweni iimviwo. Ukongezelela, LED ngaba lubeka kude kwaye ifuna malunga nesiqingatha amandla nezinye iimveliso bonisa, oko kukhokelele kulondolozo lwemali e iindleko eluncedo ebandleni lakho.
Iqela lethu lokuthengisa zobugcisa ukulungele ukunceda ukumatanisa ubulungiseleli bakho kunye ogqibeleleyo ibandla LED ukubonisa isisombululo ukuba ilingane umbono yakho mali yakho. Ukususela ekuqaleni ukuya ekugqibeleni, qiniseka ukuba iqela lethu Izakukhombisa onke amanyathelo ale nkqubo
Khazimla LED inika engaqukunjelwanga ezinkulu-format LED imiboniso ngeendlela ezahlukeneyo lwezigqibo, ngokubonelela imiboniso umfanekiso ecacileyo kunye eneenkcukacha. Ukugcina uthotho lwakho ntshumayelo entsha ngundoqo ekugcineni ibandla lenu akabuyi. Iindonga zethu LED kukunika inkululeko kwakhona kangangoko ufuna ukwamkeleka umyalezo wakho. Enoba ufuna ukubonisa ividiyo, ingoma amazwi womculo, okanye live COMPLEX ividiyo, LED imiboniso yokuzonwabisa ukunceda project umyalezo wakho ngendlela engalibalekiyo.